Thaton City Director - Ko Kyaw Thu Ya (Director - Dreams Myanmar Co.,Ltd. & MD - MM Entertainment)
သထုံမြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ko Kyaw Thu Ya (Director - Dreams Myanmar Co.,Ltd. & MD - MM Entertainment) မှ တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
Loikaw City Director - Ma Khaing Nyein Thu (Director - MM Entertainment)
လွိုင်​​ကော်​မြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ma Khaing Nyein Thu (Director - MM Entertainment) မှ ဆက်​လက်​တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
Monywa City Director - Ko Chan Nyein Ko (Business Development - Behn Meyer Myanmar Ltd & Director - MM Entertainment)
မုံရွာမြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ko Chan Nyein Ko (Business Development - Behn Meyer Myanmar Ltd & Director - MM Entertainment) မှ တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
Naypyitaw City Director - Dr. Nay Htut
​နေပြည်​​တော်​မြို့​တော်​၏ City Director အဖြစ်
Model Up Date
(Online Media & Entertainment) မှ ဆက်​လက်​တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်​။
Pathein City Director - Ma Myat Thiri Hlaing (Director - MM Entertainment)
ပုသိမ်​မြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ma Myat Thiri Hlaing (Director - MM Entertainment) မှ ဆက်​လက်​တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
Hpa-An City Director - Ko Pyae Sone (Designer: Hpa-An)
ဘားအံမြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ko Pyae Sone (Designer: Hpa-An) မှ တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
Mawlamyaing City Director - Ko Kyaw Thu Ya (Director - Dreams Myanmar Co., Ltd. & MD - MM Entertainment)
​မော်​လမြိုင်​မြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ko Kyaw Thu Ya (Director - Dreams Myanmar Co., Ltd. & MD - MM Entertainment) မှ ဆက်​လက်​တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
Moe Kok City Director - Ko Kyaw Thu Ya (Director - Dreams Myanmar Co., Ltd. & MD - MM Entertainment)
မိုးကုတ်​မြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ko Kyaw Thu Ya (Director - Dreams Myanmar Co., Ltd. & MD - MM Entertainment) မှ တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
Bagan City Director - Ma Hsaung Moe Hninn (Miss Universe Bagan 2018)
ပုဂံမြို့၏ City Director အဖြစ် Ma Hsaung Moe Hninn (Miss Universe Bagan 2018) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
Minn Bu City Director - Kelvin (SK Event Managemennt)
မင်းဘူးမြို့၏ City Director အဖြစ်​ Kelvin (SK Event Managemennt) မှ ဆက်​လက်​တာဝန်​ယူ ​ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်။​
Dawei City Director - Ko Kyaw Moe Lwin (MU Dawei Org)
ထားဝယ်​မြို့၏ City Director အဖြစ်​ Ko Kyaw Moe Lwin (Miss Universe Dawei Organization) မှ ဆက်​လက်​တာဝန်​ယူ​ ဆောင်​ရွက်​​သွားပါမည်​။
27.1.2018 နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းခရိုင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် နောက်ဖေးလမ်းကြား စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်သည့်ဝန်ထမ်းများအား MISS UNIVERSE MYANMAR ORGANIZATION မှ မုန့်များ၊ အချိုရည်များနှင့် ရေသန့်များကို သွားရောက်လှူဒ
Miss Universe Myanmar 2018 - Bago
1st Runner Up - Naypyitaw
2nd Runner Up - Tachileik
3rd Runner Up - Hpa-An
4th Runner Up - MyitKyina